उल्टियो राजनीति,राजा ल्याउने तयारी यस्तो, बावुराम नै राजावादी भएको खुलासा !
काठमाडौँ – राजनीतिक दलभित्र विवेकशील कार्यकर्ता भन्दा पनि एनिमल्स फर्मको रुपमा भेँडा जमात जम्मा गरिएको छ । भेँडाहरूलाई जसरी गोठालाले नियन्त्रण गर्दछ । त्यसैगरी नेतृत्वले नियन्त्रण गर्ने गरेको छ ।
यो भन्दा भेँडाहरूलाई तितो लाग्नसक्छ । नेकपा विभाजनपछि एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने क्रममा गणतन्त्रका महिसा बन्ने होड चलेको छ ।
अर्का गणतन्त्रका मसिहा हुँ भन्ने डा. बाबुराम भट्टराईले गणतन्त्र घोषणा पूर्व कान्तिपुर टेलिभिजनको स्व. इन्द्र लोहनीलाई दिएको बहस कार्यक्रममा साँस्कृतिक राजा राख्न सकिने घोषणा गरे । यी सबै घटनाक्रमहरू रेकर्डमा रहेका छन् । तर, भेँडाहरू यिनैलाई महान गणतन्त्रवादी भन्दै हिँडिरहेका छन् ।
नेपाली सेनाको कर्णेलबाटै अवकाश हुन लागेका उनलाई रत्नराज्यलक्ष्मी देवी शाहको निर्देशनमा उमेर सच्याएर बढुवा गरिएको कुरा विवेक शाहले ‘मैले देखेको दरबार’मा लेखेका छन् ।
उनै कटवाल सेनापति हुँदा बेबी किङको एजेन्डा बनेकोर अमेरिकी योजनामा राजालाई गलाउन कम्मर कसेर लागे । अन्ततः आफ्नो आत्मकतथा पुस्तक प्रकाशन गर्दै लाजै नमानी गणतन्त्र मैले ल्याएको हुँ भनेर लेखे ।
यतिमात्र कहाँ हो र ? पुष्पलाल अध्ययन प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराई जस्ताले पनि आफूले भारतमा माक्र्सवादी पार्टीसँग कुरा गरेर चीनलाई मिलाएर गणतन्त्र ल्याएको हुँ भनेर अन्तर्वार्ता नै दिए ।
२०६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कोइराला निवास बिराटनगरबाट मदन भण्डारी, गगन थापा र नरहरि आचार्य दरबारिया हुन् भनेको रेकर्डमा छ । त्यसैगरी सैनिक जनरल कुमार फुदुङ, पूर्व अञ्चलाधिश सूर्यबहादुर सेन ओली पनि माओवादी र गणतन्त्रवादी हिजो यिनीहरू नै कट्टर राजावादी ।
सत्य तीतो हुन्छ र तीतो यथार्थ हुन्छ । ०६१/०६२ मा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहेका पूर्व भारतीय विदेश सचिव श्यामशरणले आफ्नो पुस्तकमा गणतन्त्रका लागि नेपालको सेनालाई आफूले दबाव दिएर कन्भिन्स गरेको खुलासा गरे ।
बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्रको नारा दिनेहरूलाई व्यङ्ग्य गरेका थिए जुन कुरा रेकर्डमा छ । यतिबेला तिनै ओली नारायणहिटी अगाडि आमसभा गरेर गणतन्त्रको मसिहा बन्न खोज्दैछन् । जे’लमा बसेर जे’लका राजनीतिक कर्मीहरूको गतिविधिको सूचना तत्कालिन पञ्चायती सरकारलाई बुझाउने ओली पनि अहिले ठूला गणतन्त्रवादी बनेका छन् ।
अहिले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका कुरा गर्ने गणतान्त्रिक संविधानको सपथ खाएका मण्डलेहरू हुन् या सडकमा हसिँया हथौडा र सूर्यको झण्डा बोकेर लाल ताण्डव देखाइरहेका राता मण्डलेहरू एउटै हुन् ।
हो, अहिले जसले राजा फाले उनीहरूलाई राजाको आवश्यकता पर्नसक्छ । तर त्यो इन्डो अमेरिकी योजनामा सम्भव छैन भन्ने कुरा भर्खरै बर्मामा चीनको सहयोगमा भएको सैनिक कारबाहीबाट पनि पाठ सिक्दा हुनेछ । सबैलाई चेतना भया ।